Dinika ara-politika : tsy afa-po amin’ny zon’olombelona sy ny kolikoly ny UE | NewsMada
Dinika ara-politika : tsy afa-po amin’ny zon’olombelona sy ny kolikoly ny UE
Tsy mbola feno ny fepetran’ny mpamatsy vola. Amin’ny ankapobeny, tsy mbola afa-po amin’ny ezaka ataon’ny mpitondra manoloana ireo fepetra napetrany ny eo anivon’ny Vondrona eoropeanina (UE), amin’ny dinika politika, natao teny Iavoloha, omaly.
Nivoitra tamin’ny lahatenin’ny solontenan’ny UE eto amintsika, i Antonio Sanchez-Benedito, fa tsy mbola hita taratra ny ezaky ny fitondrana amin’ny teboka sasany, tokony harahintsika, mialoha ny hahazoana ny famatsiam-bola. “Misy ny fandrosoana saingy tokony hisy ny fifampitokisana. Tokony hamafisina ny fametrahana filaminana sy fandriampahalemana fototry ny fanajana ny zon’olombelona… Tsy mbola mipetraka koa ny Fitsarana avo natao hitsarana ireo mpitondra (HCJ)”, hoy izy. Notanisainy koa ny tsy mbola fisongadinan’ny ady atao amin’ny kolikoly sy ny fanondranana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena. Midika ho lahateny diplaomatika maneho tsy fahafaham-po amin’ny ataon’ny tompon’andraikitra isan-tokony sy ny mpitondra izany. Na tsy mivantana aza, ao anatin’ireo ny fitsaram-bahoaka mahazo vahana sy ny tsy fanajana ny zon’olombelona miseho lany. Ohatra, tsy mba hain’ny mpitandro filaminana mihitsy ny mitifitra ny tongotry ny dahalo na jiolahy… Rehefa tsy fitsaram-bahoaka izany dia fitsaran’ny mpitandro filaminana… Lasa tsy ilaina intsony ny fitsarana ?
Mandeha tsikelikely ny vola…
Ny fihanaky ny kolikoly mahazo vahana sy laka nefa tsy ahitana mangirana, indrindra ireo “Trondro vaventy” sy ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena.
Manampy ireo, tsy mbola manangasanga ny fananganana ny HCJ, anisan’ny takin’ny mpamatsy vola, indrindra fa ny UE. Nanaovana pimaso fotsiny ilazana fa efa misy dingana natao amin’izany nefa hatramin’izao, tsy misy tohiny. Takin’izy ireo koa ny hanaovana ezaka amin’ny fanarenana ny Jirama ary koa ny fanohanana sy fanampiana ireo eo anivon’ny sehatra tsy miankina. Matoa mbola mitoetra ireo fitakiana ireo, tsy nahafa-po ny nataon’ny mpitondra niainga amin’ny dinika politika teo aloha, natao tany Taolagnaro, ny volana marsa teo. Tsy mahagaga raha 15 tapitrisa dolara ihany, amin’ny 900 tapitrisa dolara avy amin’ny UE, tamin’ny dinika tany Paris farany teo no hany homeny amin’ny avrily 2017. Misy dikany izany.